Cudurka shuban biyoodka oo soo ritay in ka badan 50 qof tuulada Saddex-higlo - Radio Ergo
(ERGO) – Ugu yaraan konton iyo afar qof oo afartan iyo toddobo ay carruur yihiin ayaa uu soo ritay cudurka shubanka tan iyo toddobaadkii la soo dhaafay. Cudurka ayaa ka dilaacay tuulada Saddex-higlo ee gobolka mudug oo Galkacyo dhanka koonfurta kaga beegan 50 km, sida ay Raadiyow Ergo u xaqiijisay Faaduma Cawil Salaad oo madax ka ah xarunta caafimaadka ee Saddex-higlo. Dadkan ayaa guryadooda lagu dabiibayaa maaddaama xarunta caafimaadka ee Saddex-higlo aysan lahayn qayb dadka la jiifiyo.
“Gargaarka ayaan u fidinnaa, qofka waxaa waaye in aan ogaanno xaaladdiisa iyo heerka uu joogo fuuqbixiisa, waxaan siina marka hore ORS iyo daawooyin kale oo fuuq celin ah oo soo celinaya jismigiisa waxa kabaxay, Waxaa kale oo aan ku xirna (kaanool) carruurta xaalladooda ay halista tahay ee aan afka waxba ka qaadan karin oo u baahan in la siiyo faleenbooyinka nafaqada,” ayay tiri Faadumo.
Faadumo ayaa sheegtay in celcelis ahaan maalintii 10 qof oo carruur u badan ay xaruntu qaabisho. Xarunta deegaanka ee Seddex-higlo waxaa dhanka dawada iyo mushaarsiinta shaqaalaha kataageera hay’ada saf-UK oo muddo lix bilood uun kahowl galaysa.
Dahabo Axmed Aadan waxay ka mid tahay waalidiinta la halgamaya soo kabashada caruurtooda. Waxaa uu cudurka kaga dhacay laba cunug kuwaa oo ay gaysay xarunta caafimaad ee deegaanka. Waxa ay sheegtay in howl wadeennada isbitaalku u xaqiijiyeen in cudurka shubanka ay la ildaran yihiin carruurteeda.
“Horta ilmaha afku wuu qalalay, cunnada way qaadan waayeen marka afka aan wax u galiyo way soo matagayeen biyahaas cad xitaa calooshooda ma gaarayn, Iyaga oo maliil ah ayaan isbitaalka keenay,” ayay tiri Dahabo.
Sahra Axmed Cali oo ah hooyada qoys 6 qof ah waxaa cudurka shubanku uu ka haleelay wiil 5 jir ah afar-maalin ka hor.
“Waxaa qabatay qandho saa’id ah kaddibna shuban iyo matag ayuu billaabay, isaga oo xaaladiisu liidato oo sidii u fuuqbaxaya ayaan isbitaalka keenay, Hal saac ayaan guriga ku hayay, Markii aan isbitaalka keenay, waxaa la ii siiyay daawooyin sida faleenbooyinka,” ayay tiri Sahro oo ka mid ahayd qoysaskii guryahooda uga barakacay biyaha roobka ee soo rogmaday tuulada.
Guddoomiyaha deegaanka Saddex-higlo Khaliif Warsame Maxamed ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in boqollaal qoys oo guryahooda ugu barakacay todobaadkii hore daadad kusoo rogmaday ay si teel-teel ah ugu soo laabanayaan xaafadaha biyuhu harqiyeen. Waxa uu xusay in dhowr iyo taban guri roobka uu dumiyay.
“Kowdii bishaan 1aad ayay roobabku da’een ilaa 7-dii bisha way socdeen, Waxa ay sameeyen guryaha dadka danyarta ay daganaayeen, ilaa 50 musqulood ayay biyuhu dulmareen oo qaarkoodna dumeen,” ayuu yiri guddoomiyaha.
Mudug: Qoysas ka faa’iideysanaya ceel laga qoday Tuulada Farxaan